Maamulka Galmudug oo soo bandhigay haweeney laga soo bad-baadiyay koox burcad badeed ah (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maamulka Galmudug oo soo bandhigay haweeney laga soo bad-baadiyay koox burcad badeed ah (SAWIRO)
Waxaa maanta magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud lagu soo bandhigay haweeney Kenyaati ah oo ay ciidanka Galmudug si xoog ah uga soo furteen kooxo burcad badeed ah oo muddo 2 sanno ah afduub ugu haystay.
Haweeneydaan oo lagu magacaabo Lois Njoki Weru, ayaa sheegtay in mudadii afduubka loogu heystay loola dhaqmi jiray si ka baxsan bini-aadaminada, islamarkaana xilliyada qaar loo diidi jiray inay xitaa biyo cabto.
Sanadkii 2014 bisha November ayaa haweeneydaan iyo nin ay isla shaqeeynayeen oo lagu magacaabo James Gachamba Kuria waxaa gudaha Soomaaliya ka afduubtay kooxo burcad badeed ah oo doonayay in lacag madax-furasho ah laga siiyo.
Mr. James Gachamba Kuria ayaa bishii Febraayo ee sanadkaan aynu ku jirno lasoo bad-baadiyay, kadib markii ay ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa nabad-sugidda ay howlgal qorsheysan ku qaadeen kooxahaasi burcad ah ee afduubka u heysatay.
Sidoo kale, haweeneydaan oo maanta saxaafadda la hadashay ayaa sheegtay inay nabad-qabto islamarkaana ay haatan la joogto madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi Carabeey.
“Muddo labo sano ah waxaa u afduubnaa dad aan naxariis laheyn, waxaa xalay isoo bad-baadiyay ciidanka Galmudug, waxaan haatan la joogaa madaxwayne ku-xigeenka Galmudug oo si weyn uga qeyb qaatay soo deyntayda, waxaan dhihi karaa howshaasi ma fududeyn, balse hadda waxaan ahay qof xur ah” Sidaas waxaa tiri Lois Njoki Weru.
Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi Carabeey oo isna saxaafadda halkaasi kula hadlay ayaa sheegay in haweeneydaan lasoo bad-baadiyay islamarkaana dhawaan dalkeeda loogu dhoofin doonno.